musoro weQa - mabasa uye mabasa
Kuru Qa Musoro weQA - Mabasa uye Mabasa
Musoro weQA - Mabasa uye Mabasa
Musoro weQA chinzvimbo chinzvimbo chepamusoro mukati mesangano iro rinowanzo kuve rinotevera danho kubva kumusoro kweQA maneja chinzvimbo. Muchikamu chino, isu tinonyora pasi zvinoitwa neMusoro weQA basa.
Musoro weQA Basa
Zvichienderana nebasa uye nesangano, Musoro weQA chinzvimbo chinogona kunge chiri maoko-on kubva kune tekinoroji yekutarisa kana maoko-kure aine tarisiro pazano nemaitiro, kana inogona kuve musanganiswa wezvose.
Kazhinji, panongova nebasa rimwe chete reMusoro weQA musangano uyo unotsanangura nzira yeQA uye nzira yezvigadzirwa zvese zvekambani uye pakupedzisira ive nebasa rekuona mhando yechigadzirwa.
Basa rinoda kufunga zvine hungwaru nekuronga uye nekupa hunyanzvi mukati mezvese zvigadzirwa kugadzirwa kwehupenyu hwekutenderera uine pfungwa yakasimba yehunhu hwehunhu kuve nechokwadi chekuti mhando yakabikwa mukati kubva pakutanga.
Nekuti iro basa reMusoro weQA ndiko kunotevera kufambira mberi kwechisikigo kubva kuQA maneja chinzvimbo, munhu wacho anofanirwa kuve neakavimbika rekodhi yekuvaka zvikwata zveQA, manejimendi mashandiro uye kutungamira kwezvikwata zveQA. Maneja achapa kutungamira kwese, kuraira, uye kudzidzisa kunhengo dzeboka reQA, kuve nechokwadi chekubudirira kwechikwata chemanyorerwo uye otomatiki.
Musoro weQA uchave nehunhu hweQA nharaunda pane zvese zvigadzirwa. Kushanda padhuze neiyo DevOps timu kutsanangura yakanakisa mhinduro kune yega yega chikuva.
Musoro weQA ichatorawo basa rekuona kuti ese mabasa ekuvandudza anosangana nemhando yepamusoro kuburikidza nekuronga bvunzo, kuedzwa kwekuedzwa, kuvimbiswa kwemhando yepamusoro uye nenyaya yekutevera.
Izvo zvakakosha kuti Musoro weQA utarise kuendesa uye kugadzirisa kweakajairwa zviitiko uye masisitimu akavakirwa pane indasitiri maitiro akanakisa.
Musoro weQA Unyanzvi
Chaiye Musoro weQA munhu anofanirwa kuve neanotevera hunyanzvi (kwete runyoro rwakakwana nechero nzira!)
QA Management ruzivo kune akawanda mapurojekiti, kure-kumahombekombe uye-mumba.
Iva mutungamiri akasimba ane ruzivo mukushandisa uye kuumba maitiro eQA emakambani nemaitiro.
Iva nehunyanzvi hwakasimba hunyanzvi, zvese zvinoshanda uye zvisinga- shande, manyore uye otomatiki, zvine hungwaru munzvimbo inoenderera yekuendesa
Unyanzvi hwakasimba hwekutaurirana nevose vane chekuita navo kuti vaone kuti QA chiratidzo chinonzwisiswa uye chinoitwa nemazvo.
Iva mutsigiri weQuality Assurance, Inopfuurira Kuvandudza uye indasitiri inozivikanwa Yakanakisa Maitiro.
Ruzivo rwakanaka kwazvo rweRisk Management, Kuziva Njodzi uye Kuisa Pangozi Kuongorora.
Chiitiko chekugadzirisa ekuyedza madhipatimendi kana ekuyedza mabasa, kugadzirisa makuru uye akaoma zviitiko uye maitiro.
Inochinjika nekwanisi uye nekushanda pasi pekumanikidzwa.
Proactive, yakasimba-pfungwa, anokurumidza kufunga uye kuzvishingisa.
Inokwanisa kukurudzira timu, kuziva tarenda rakanaka uye kuburitsa zvakanakisa kubva kune mumwe nemumwe munhu.
Munhu akura uye ane hunyanzvi anozvikurudzira uye anofarira.
Akanaka kutaurirana, hunyanzvi hwekukurudzira uye hunyanzvi hwekutaurirana kuti utore manejimendi-pinda mazano nemifungo.
Inokwanisa kutaura nematanho ese ehutariri uye vezera mukati mesangano.
Kuvaka nekuchengetedza hukama.
Iko kugona kukoshesa basa uye mabasa pasi pekumanikidzwa.
Kugona kugadzirisa kupokana zvinobudirira.
Kugona kuvaka, kuita uye kururamisa mhando simbiso yemhando uye chengetedza mhando yekuendesa.
Musoro weQA Mabasa
Inotarisirwa Kutsanangura QA zano, maitiro uye kuitisa muzvirongwa zvekusimudzira.
Inoona nezveKutungamira uye kutungamira boka rehutungamiriri reQA.
Ipa hutungamiriri uye hunyanzvi hwehunyanzvi mukati meTest Automation uye Hunhu Assurance.
Iva anozvidavirira kune bvunzo otomatiki mapurojekiti, chipangamazano, uye upe hutungamiriri kune iyo QA otomatiki vanogadzira uye mamaneja.
Tora chikamu mune kubvunzurudzwa, kuburitswa, kudzidziswa uye kuita kweyekutarisa kweese QA inotungamira.
Ipa hutungamiriri hwehunyanzvi uye hunyanzvi mukati memunda weQuality Assurance uye Kuedzwa.
Kuona chokwadi chekuti zvikwata zvekuvandudza zvinoteerera kunheyo, nhungamiro nemaitiro akanakisa eQA zano sekutsanangurwa.
Tarisa pane zvinoenderera QA kuvandudzwa kusanganisira kushandiswa kwakakodzera kwekuyedza maturusi, bvunzo nzira, bvunzo otomatiki.
Kuvaka uye kugadzirisa kwehunhu hwemhando pamwe nekumanikidza hunyanzvi uye kuyedza zviyero.
Kuongorora kwese zviitiko zveQA, mhedzisiro yekuyedza, kukanganisa kwakaburitswa, kukonzeresa chikonzero uye kuongorora nzvimbo dzekuvandudza. Ita matanho anodiwa kuti uvandudze maitiro.
Unganidza uye upe zviyero zvekuyedza uye zviitiko zvekuyedza zvemapurojekiti kune vane chekuita navo.
Ita shuwa mashandisirwo akakodzera ezvekushandisa maturusi kuti uwane iyo yakanyanya kubatsirwa yeQA kuedza. Izvi zvinosanganisira maturusi ekuyedza anoshanda, mashandiro, otomatiki, nezvimwe.
Manage kudzidziswa uye kuenderera mberi kwekudzidza kwevashandi veQA pachishandiswa makosi mapfupi, misangano, kusangana, zvitupa, nezvimwe.
Iva nzvimbo yekukwira yezvinhu zvese zvine chekuita nekuyedzwa uye kuvimbiswa kwemhando yepamusoro uye unoshanda senzvimbo yekutanga yekubatana nezvikwata zveQA.
Tungamira kuvandudza kweQA zano, maitiro, kuranga uye chimiro. Kutyaira nekuvandudza timu yeQA munzvimbo dzekuyedza dzoga uye kuyedza kunonoka.
Ipa hunyanzvi hwehunyanzvi muTest Automation, Maedzo Ekuyedza, Maitiro Ekuyedza, Zvishandiso uye Matekiniki kumatimu ese.
Shanda nevatungamiriri veQA, mamaneja Ekuvandudza uye Software Development Dhairekitori kugadzira nekuita maQA marongero ekusangana nekupfuura dhipatimendi uye zvemakambani zvemhando yepamusoro zvibodzwa.
Mune ino posvo takadzidza nezve iro basa reMusoro weQA, ndeapi hunyanzvi anodikanwa uye zvinotarisirwa kune iye munhu ari kuzadzisa iro basa.
maitiro ekuwana json mhinduro kubva kuzororo api muJava
htc imwe m7 vs htc imwe
10 mitambo yemitambo yepamusoro yeApple neIOS muna 2020
Nhare dzisina waya dzakachengeteka here?
T-Mobile vatengi vanogona ikozvino kubhadhara mabhiri avo online uye muapp vachishandisa Apple Pay
HTC 10 vs HTC One M9 vs HTC One A9: specs kuenzanisa
Simudza yako yekutumira mameseji mutambo neaya makuru mashanu eSMS uye MMS maapplication evashandisi veApple